ချင်ရှီဟွမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ချင်နိုင်ငံတော်၏ ပထမဆုံး ဧကရာဇ်တမ်းပလိတ်:SHORTDESC:ချင်နိုင်ငံတော်၏ ပထမဆုံး ဧကရာဇ်
မေလ ၇ရက် ၊၂၄၇ ဘီစီ – ၂၂၁ ဘီစီ
တရုတ်ပြည် ၏ ဧကရာဇ်
၂၂၁ ဘီစီ – စက်တင်ဘာလ ၁၀ရက် ၊၂၁၀ ဘီစီ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ရက်၊ ၂၅၉ ဘီစီ
စက်တင်ဘာလ ၁၀ရက် ၊၂၁၀ ဘီစီ (သက်တော် ၄၉နှစ်)
အိမ်ရှေ့စံ မင်းသား ဖုဆု
姓 - မျိုးရိုးအမည်: ရင် (嬴)
氏 မိသားစု အမည်: ကျောက် (趙)
名 အမည်: ကျန့် (政)
မိဖုရားခေါင် မယ်တော်ကြီး ကျောက်
တံဆိပ် စာသား (အပေါ်ဘက်) ဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် "ချင်ရှီဟွမ်" နှင့် ပုံမှန် (အောက်ဘက်)ဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် တရုတ် စကားလုံးများ
[tɕʰǐn ʂɨ̀ xwǎŋ] ( နားဆင်)
ရှီဟွမ်တီ (ဘီစီ ၂၅၉-၂၁၀)
ရှီဟွမ်တီ၏ အုတ်ဂူ (ရှီးအန်းပြတိုက်)
ချင်ရှီဟွမ် (အင်္ဂလိပ်: Qin Shi Huang Di, (တရုတ်: 秦始皇; literally: "ချင် ၏ ပထမဆုံး ဧကရာဇ်", အသံထွက် (ကူညီ·ချက်လက်);(ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက် ဘီစီ ၂၅၉ မှ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် ၂၁၀ ဘီစီ ) သည် ချင်မင်းဆက် ကို တည်ထောင်သူဖြစ်၍ တရုတ်ပြည်ထောင် ၏ ပထမဆုံး ဧကရာဇ် ဖြစ်လေသည်။ ငယ်မည် "'ရင်ကျန့်'" (嬴政)(သို့) "'ကျောက်ကျန့်'" (趙政) ဖြစ်၍ ချင်ပြည်ထောင်၏ မင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အသက် ၁၃ နှစ်တွင် ချင် မင်းကြီး ကျန့် (秦王政) အဖြစ် နန်းတက်ခဲ့ပြီး ချင်ပြည်ထောင်သည် အခြားသော စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေသည့် နယ်မြေများကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၂၁ ဘီစီတွင် တရုတ်ပြည်ကို ပေါင်းစည်း နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် သက်တော် ၃၈နှစ်တွင် တရုတ်ပြည်၏ ပထမဆုံး ဧကရာဇ် ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ ယခင်က ရှန် မင်းဆက် နှင့် ကျိုးမင်းဆက်တို့မှ မင်းဆက်များ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည့် "မင်းကြီး"(王 (ဝမ်) ဘွဲ့တော်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်း မရှိဘဲ သူသည် ၂၂၁ ဘီစီမှ ၂၁၀ ဘီစီအထိ ချင်မင်းဆက်၏ ပထမဆုံး ဧကရာဇ် (始皇帝) အဖြစ် အုပ်စိုးခဲ့သည်။ သူ တီထွင် အသုံးပြုခဲ့သော "ဧကရာဇ်" (皇帝 huángdì) ဟူသည့် ဘွဲ့တော် နှင့် အရှေ့တွင် သုံးနှုန်းထားသည့် "ပထမဆုံး"ဆိုသော စကားသည် နောက် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ခန့်အထိ အဆက်ဆက်သော တရုတ်ပြည်မင်းဆက်များ အတုယူ သုံးနှုန်းစရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူ၏ နန်းစံနှစ်တွင် သူ၏ စစ်သူကြီးတို့သည် တရုတ်ပြည် နယ်မြေများကို ချဲ့ထွင်ခဲ့ကြသည်။ ချူ (ပြည်ထောင်) ၏ တောင်ဘက်သို့ စစ်ဆင်နွှဲခြင်းများ သည် ဟူနန် နှင့် ဂွမ်ဒုန်ရှိ ယွဲ့နယ်မြေများကို တရုတ်လူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှု စက်ကွင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းလိုက်သလိုပင် ဖြစ်သည်။ အာရှ အလယ်ပိုင်းတွင် စစ်ဆင်နွှဲမှုများသည် အော်ဒို ပတ်လမ်းကို ရှူံးနူတို့ထံမှ သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ရှူံးနူတို့သည် မိုတု ချန်ယု၏ အုပ်စိုးမှုအောက်တွင် ခိုလှုံခြင်းဖြင့် စုစည်းမိကြသည်။
ချင်ရှီဟွမ်သည် သူ၏ အမတ်ကြီး လီစီးနှင့် တွဲဖက်၍ ရှေး တရုတ်နယ်မြေအသီးသီးတွင် ကျင့်သုံးခဲ့သည့် အလေ့အထတို့ကို တညီတညွတ်ထဲဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အဓိကကျသည့် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။  သေချာစွာ သုံးသပ်ကြည့်လျှင် သံသယဝင်ဖွယ်ရှိသည့် အချက်များကို တွေ့ရသော်လည်း ချင်ရှီဟွမ်သည် စာပေကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း နှင့် များစွာသော စာအုပ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးစေခြင်း နှင့် စာပေပညာရှင်များကို သတ်ဖြတ်ကွပ်မျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သည်ဟု ပြောဆိုခြင်း ခံရသည်။ သူ၏ လူသိရှင်ကြား လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပြည်နယ်တို့အနှံ့ ပြန့်ကျဲနေခဲ့သော တံတိုင်းများကို တရုတ်ပြည်၏ မဟာတံတိုင်းကြီး တစ်ခုအဖြစ် စုစည်းစေခြင်း၊ ကြီးမားလှသည့် နိုင်ငံတော် အဆင့် လမ်းမကြီးများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မြို့တော်တစ်မျှကြီးမားလှသည့် ဂူသင်္ချိုင်းကြီးနှင့် ၎င်းကို စောင့်ကြပ်နေသော လူသဖွယ် ရွှံ့ရုပ်စစ်တပ်ကြီးတို့ပင် ဖြစ်တော့သည်။  သူသည် တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်းကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစဉ် ၂၁၀ ဘီစီ၌ ကွယ်လွန်သည်အထိ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့လေသည်။
ဧကရာဇ်ဖြစ်လျှင် ယခင် ကျိုမင်းဆက်လက်ထက်ကဲ့သို့ ပဒေသရာဇ်တို့ တဖန်အင်အားကောင်းလာမည်ကို မလိုလားသဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်သည်။ နယ်စား၊ ဘုရင်ခံတို့ ကို တစ်နယ်တည်း အတည်တကျမထားပဲ အလှည့်ကျရွှေ့ပြောင်းစေသည်။ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကိုလည်း နေပြည်တော်တွင် ချန်ရစ်စေသည်။ လမ်း၊ တံတား အစရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်သည်။ အလေး၊ တင်းတောင်း၊ အချိန်အတွယ်၊ အတိုင်းအတာတို့ကို တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဘီစီ ၃၁၂ တွင် ကွန်ဖြူးရှပ် ကျမ်းစာများ အပါအဝင် တရုတ်အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ ကျမ်း၊စာပေ အစရှိသည်တို့ကို မီးရှို့ဖျက်စီးစေသဖြင့် လူအများကြောက်ရွှံထိတ်လန့်ရသည်။ သို့သော် ကျမ်းတစ်စောင်စီကိုမူ နန်းတွင်းမော်ကွန်းတိုက်သို့ပို့ကာ သိမ်းဆည်းစေခဲ့သည်။ နောက် ကွန်ဖြူးရှပ်ကျမ်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များက နှုတ်ဖြင့်ဆက်လက်ပြန့်ပွားအောင် လုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ အရှင်လတ်လတ် မြေမြုပ်သတ်စေသည်။
ယနေ့တရုတ်နိုင်ငံမျှ မကြီးမားသည့် တရုတ်ပြည်နယ်နိမိတ်ကို အဘက်ဘက်သို့ချဲ့ထွင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ တောင်ဘက်တွင် ဆက်တိုက်သိမ်းသွင်းပြီး အရယူထားသော်လည်း၊ အနောက်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင်မူ အနိုင်တိုက်ခဲ့သော်လည်း ခြေကုတ်မယူနိုင်ခဲ့ပေ။ ထို့ပြင် ထိုအနောက်ဘက်နှင့်မြောက်ဘက် တစ်လွှားမှ ရန်သူ (လူမျိုးစုအများအပြား)၏ ရန်မှကာကွယ်ရန် မဟာတံတိုင်းကြီး ဂရိတ်ဝေါလ် (Great -Wall) ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကြောင့် လူတို့ဆင်းရဲတွင်းနက်ပြီးသည်မှ မကြာသေးချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့ကြီးမားလှသည့် စီမံကိန်းကြီးကို လူအင်အားသုံး ဖော်ဆောင်ခြင်းမှာ ယနေ့ခေတ်အမြင်တွင်မှမဟုတ် ရှေးလူတို့အတွက် အလွန်မှ ရက်စက်လှသည်ဖြစ်သဖြင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်တွင် ပုန်ကန်ထကြွမှုများကို နည်းများမဆို ရင်ဆိုင်ရတော့သည်။ ၎င်းသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်တွင် ကောင်းစွာနှိမ်နှင်းနိုင်သဖြင့် မစိုးရိမ်ရသော်လည်း ၎င်းနတ်ရွာစံသည့် ဘီစီ ၂၁၀ နောက် ဒုတိယသား အဲ့ရှီဟွမ်တီ(Second of Premier Emperor) ဘွဲ့ဖြင့်နန်းတက်လာပြီးနောက်တွင် ကောင်းစွာ အုပ်ချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိ၊ ပုန်ကန်ထကြွမှုများကိုလည်း ဖခင်ကဲ့သို့ ကောင်းစွာမနှိမ်နှင်းနိုင်သဖြင့် ၄နှစ်အတွင်း သတ်ဖြတ်ခံရကာ ချင်မင်းဆက်လည်း အချိန်တိုအတွင်း ပျက်သုဉ်းရသည်။ ရှီဟွမ်တီ၏ ကြီးကျယ်ခန်းနားသည့် အုတ်ဂူကြီးမှာလည်း ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသည်။
ရှီဟွမ်တီကို နှောင်းခေတ်လူတို့က ကွန်ဖြူးရှပ်စ်ဝါဒအား နှိပ်ကွပ်သည်ကိုအကြောင်းပြုပြီး မုန်းတီးစိတ်အခံကြောင့် မျိုးမစစ်၊ လင်ကောင်မပေါ်ပဲမွေးသည့်သား အစရှိသဖြင့် ပြောဆိုရှုံ့ချကြသကဲ့သို့၊ ကွန်မြူနစ်တို့က တိုးတက်သောအမြင်ရှိသူဟု ဆိုကာ ချီးမြှောက်ကြသည်လည်းရှိသည်။ ရှီဟွမ်တီ ထူထောင်သည့် တရုတ်အင်ပါယာ မှာ ဩဂတ်စတက်ဆီဇာ (Augustus Ceasar) ထူထောင်သည့် ရောမအင်ပါယာ (Roman Empier) နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေ မကွာလှပေ။ သို့သော် ရောမအင်ပါယာက ပြိုကွဲပြီး တရုတ်အင်ပါယာမှာ တရုတ်နိုင်ငံအဖြစ်နှင့် သမိုင်းတလျှောက်ရပ်တည်နေနိုင်သည်မှာ ရှီဟွမ်တီ၏ အစွမ်းကြောင့် ဟုဆိုနိုင်သည်။
၁ အမည်၏ အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေခြင်း
၂ မွေးဖွားခြင်း နှင့် မိဘများ အကြောင်း
၃ ချင်မင်းကြီး အဖြစ် အုပ်စိုးခြင်း
၃.၂ လော်အိုင်းမှ ပုန်ကန်ရန် ကြိုးစားခြင်း
၃.၃ ပထမအကြိမ် လုပ်ကြံခံရခြင်း
၃.၄ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ကြံခံရခြင်း
၃.၅ တရုတ်ပြည်ကို ပေါင်းစည်းခြင်း
၄ ချင်၏ ဧကရာဇ် အဖြစ် အုပ်စိုးခြင်း
၄.၁ အုပ်ချုပ်စီမံရေးတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း
၄.၂ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း
၄.၃ အတွေးအခေါ် ဝါဒ
၄.၄ တတိယအကြိမ် လုပ်ကြံခံရခြင်း
၄.၅ လူသိများသည့် လုပ်ဆောင်မှုများ
၄.၅.၁ မဟာ တံတိုင်းကြီး
၄.၅.၂ လင်းချူ တူးမြောင်း
၄.၆ မသေဆေးကို ရှာဖွေခြင်း
၅ ကွယ်လွန်ခြင်း နှင့် သေဆုံးခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ အဖြစ်အပျက်များ
၅.၁ ဒုတိယ ဧကရာဇ်တင်မြှောက်ခြင်းတွင် အရှုပ်အထွေးများ ပေါ်ပေါက်ခြင်း
အမည်၏ အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ယနေ့တွင် ချင်ရှီဟွမ်၏ အမည်မှာ ရင်ကျန့် ဖြစ်ပြီး မျိုးရိုးအမည်အဖြစ် ရင် (嬴) စာလုံးနှင့် ကျန့် (政) စာလုံးတို့ကို ပေါင်းထားသည်ဟု အရင်းအမြစ်များအရ မကြာခဏ ဆိုကြသည်။ ရှေးတရုတ်ပြည်တွင်မူ အမည်ပေးပုံမှာ ကွဲပြားသည်။ ကျောက် (趙) ကို မျိုးရိုးအမည်အဖြစ် သုံးပါသည်။
ချင် ပြည်ထောင်ကို အုပ်ချုပ်သူများသည် မိမိတို့ကိုယ်ကို မင်းကြီးများအဖြစ် သမုတ်ကြသည်မှာ ၃၂၅ဘီစီမှ မင်းကြီး ဟွေ့ဝမ်း လက်ထက်ကတည်းက ဖြစ်သည်။ နန်းတက်သောအခါ ကျန့်သည် ချင် မင်းကြီး (သို့မဟုတ်) ချင် မင်းကြီး ကျန့်အဖြစ် လူသိများသည်။ ထိုဘွဲ့တော်သည်ပင် ရှန် မင်းဆက် နှင့် ကျိုးမင်းဆက် တို့မှ အုပ်စိုးသူများနှင့် အဆင့်အတန်းတူသကဲ့သို့ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ချီ ပြည်ထောင်၏ လက်နက်ချခြင်းကို လက်ခံပြီးနောက် ၂၂၁ ဘီစီတွင် မင်းကြီး ကျန့်သည် ယခင် ကျိုး တိုင်းပြည်၏ နယ်မြေတို့ကို ပြန်လည်စုစည်းမိပြီးဖြစ်၏။ သူ၏ ဘွဲ့တော်ကို မင်းကြီးဟု ခေါ်တွင်ခြင်း မပြုဘဲ  ဟွမ်တီ (ဧကရာဇ်)ဘွဲ့တော်ကို တီထွင်၍ မိမိကိုယ်ကို သမုတ်ခဲ့သည်။
မွေးဖွားခြင်း နှင့် မိဘများ အကြောင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ချင်မင်းကြီး အဖြစ် အုပ်စိုးခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၈ရာစုမှ တရုတ်ဧကရာဇ်များ၏ ပုံတော်များကို စုစည်းထားမှုတွင် ချင်မင်းဆက်၏ ပထမဆုံး ဧကရာဇ် ဖြစ်သော ချင်ရှီဟွမ်တီကို သရုပ်ဖော်ထားသည့် ပုံတစ်ပုံ
လော်အိုင်းမှ ပုန်ကန်ရန် ကြိုးစားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
; အရှေ့ပိုင်း ဟန်ခေတ်၊တတိယ ရာစု မှ ကျောက်ခြစ်လက်ရာ၊ ၊ ချင်ရှီဟွမ်ကို ကျင့်ခယ်မှ လုပ်ကြံရန် ကြိုးစားခြင်း ၊ကျင့်ခယ်(ဘယ်ဖက်ခြမ်း)သည် ချင်ရှီဟွမ်၏ သမားတော်တစ်ဦး(ဘယ်ဖက်၊ နောက်ခြမ်း)မှ ဖမ်းချုပ်ထားခြင်းကို ခံနေရသည်။ လုပ်ကြံရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဓားမြှောင်သည် တိုင်တွင် စိုက်နေသည်။ ချင်ရှီဟွမ်(ဘယ်ဖက်ခြမ်း)သည် နန်းတွင်း ကျောက်စိမ်းပြားကို ကိုင်တွယ်လျက် တွေ့နေရသည်။ သူ၏ စစ်သည် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)သည် ဧကရာဇ်ကို ကယ်ရန် အလျင်အမြန်လာသည်။
ချင်၏ အခြားသော ၇ ပြည်ထောင်ကို သိမ်းယူခြင်း
ချင်၏ ဧကရာဇ် အဖြစ် အုပ်စိုးခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ချင်မင်းဆက် မြေပုံနှင့် အုပ်ချုပ်စီမံရေးဆိုင်ရာ ဒေသများပိုင်းခြားထားခြင်း
ချင်ရှီဟွမ်သည် ဓာတ်ငါးပါးအတွေးအခေါ်ကျောင်း၏ မြေကြီး၊ သစ်သား၊ သတ္တု၊ မီး နှင့် ရေတို့ကို အခြေခံသည့် အတွေးအခေါ်ကိုလည်း လိုက်နာသည်။ (五德終始說) ကျောက်ကျန့်၏ ဓာတ်သည် ရေဓာတ် ဖြစ်၍ ထိုဓာတ်သည်ပင် အနက်ရောင် နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ထိုစဉ်က အယူရှိသည်မှာ ယခင် ကျိုးအိမ်တော်သည် မီး၏ စွမ်းအားဖြင့် ဒွန်တွဲနေပြီး အနီရောင်သဘောရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လာမည့် ချင်မင်းဆက်သည် စာရင်းအရ နောက်ထပ်ဓာတ် ဖြစ်သည့် ရေဓာတ်၊ အရောင်အားဖြင့်လည်း အနက်ရောင်ဖြစ်ရမည်။ အနက်ရောင်ကို ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ အလံများ၊ တံခွန်ကုက္ကားများတွင် အသုံးပြုလာစေသည်။ အခြားအယူများမှာ မြောက်ဘက်သည် အရပ်လေးမျက်နှာ အဝင်ဖြစ်ခြင်း၊ ဆောင်းရာသီဖြစ်ခြင်း နှင့် နံပါတ် ၆ ကို ကိုယ်စားပြုခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တရုတ်ပြည်မှ မဟာရံတံတိုင်းကြီး
ကွယ်လွန်ခြင်း နှင့် သေဆုံးခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ အဖြစ်အပျက်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဒုတိယ ဧကရာဇ်တင်မြှောက်ခြင်းတွင် အရှုပ်အထွေးများ ပေါ်ပေါက်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဝီကီကိုးကားချက်တွင် ချင်ရှီဟွမ် နှင့်ပတ်သက်သော အဆိုအမိန့်များ ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Wood, Frances. (2008). China's First Emperor and His Terracotta Warriors, pp. 2–33. Macmillan Publishing, 2008. ISBN 0-312-38112-3.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Duiker, William J. & al. World History: Volume I: To 1800, 5th ed., p. 78. Thomson Higher Education Publishing, 2006. ISBN 0-495-05053-9.
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Firsteselect
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named nianfang
↑ 司马迁 [Sima Qian]. 《史记》 [Records of the Grand Historian], 秦始皇本纪第六 ["§6: Basic Annals of the First Emperor of Qin"]. Hosted at 國學網 [Guoxue.com], 2003. Accessed 25 Dec 2013. (တရုတ်)
↑ Sima Qian translated by William Nienhauser Jr. & al. as The Grand Scribe's Records, Vol. 1 The Basic Annals of Pre-Han China, isaacthekidRS123 p. 123.
↑ Sima Qian. 《史记》 [Records of the Grand Historian], 秦本纪第五 ["§5: Basic Annals of Qin"]. Hosted at 國學網 [Guoxue.com], 2003. Accessed 25 Dec 2013. (တရုတ်)
↑ Wilkinson, Endymion. Chinese History: A Manual, pp. 108 ff. Harvard University Press (Cambridge), 2000. ISBN 0-674-00247-4. Accessed 26 Dec 2013.
↑ Murowchick, Robert E. (1994). China: Ancient Culture, Modern Land. University of Oklahoma Press, 1994. ISBN 0-8061-2683-3. p. 105.
Bodde၊ Derk (1987)။ "The State and Empire of Ch‘in"။ in Twitchett၊ Denis; Loewe၊ Michael (eds.)။ The Cambridge history of China။ 1။ Cambridge: Cambridge Univ. Press။ pp. 20–103။ ISBN 0-521-21447-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Clements၊ Jonathan (2006)။ The First Emperor of China။ Sutton Publishing။ ISBN 978-0-7509-3960-7။
Cotterell၊ Arthur (1981)။ The first emperor of China: the greatest archeological find of our time။ New York: Holt, Rinehart, and Winston။ ISBN 0-03-059889-3။
Guisso၊ R.W.L.; Pagani၊ Catherine; Miller၊ David (1989)။ The first emperor of China။ New York: Birch Lane Press။ ISBN 1-55972-016-6။
Yu-ning၊ Li, ed. (1975)။ The First Emperor of China။ White Plains, N.Y.: International Arts and Sciences Press။ ISBN 0-87332-067-0။
Portal၊ Jane (2007)။ The First Emperor, China's Terracotta Army။ British Museum Press။ ISBN 978-1-932543-26-1။
Qian၊ Sima (1961)။ Records of the Grand Historian: Qin dynasty။ Burton Watson, trans။ New York: Columbia Univ. Press။
Yap၊ Joseph P (2009)။ Wars With the Xiongnu, A Translation From Zizhi tongjian။ AuthorHouse။ ISBN 978-1-4490-0604-4။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချင်ရှီဟွမ်&oldid=719826" မှ ရယူရန်
၂၆၀ ဘီစီ မွေးဖွားသူများ
၂၁၀ ဘီစီ သေဆုံးသူများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။